नाडामा गाडी, गाडीभित्र नक्कली नोटको गड्डी – MySansar
Posted on September 3, 2017 December 27, 2021 by Salokya
सुरुवाललाई कम्मरमा बाँध्न इजार हुन्छ। सलवारमा भने नाडा हुन्छ। तर काठमाडौँमा नाडा भन्नाले अर्कै बुझिन्छ- नेपाल अटो मोबाइल डिलर्स एसोसिएसनलाई छोटकरीमा भनिने शब्द हो नाडा। हरेक वर्ष दशैँअगाडि यो संस्थाले गाडी प्रदर्शनी गर्ने गर्छ जसलाई नाडा अटो शो भनिन्छ। शो आइतबार सकियो। गाडीको मोडलमात्र हैन, गाडीसँगै उभिने मान्छे मोडल हेर्नका लागि पनि यो प्रदर्शनी प्रख्यात छ। गाडी लञ्च हुँदा वा प्रदर्शनीमा महिला मोडल राख्ने नेपालको मात्र हैन बाहिरका देशहरुको पनि चलन हो। यसमा नौलो मान्नुपर्ने केही छैन। अचम्म त एउटा गाडीमा नोटको गड्डी राखेको देख्दा पो लाग्यो।
अलि नजिक गएर हेर्दा पो थाहा भयो, नोट त नक्कली पो रहेछ। हजारका नोटमा डम्मी लेखिएको रहेछ। प्रदर्शनीमा दर्शकको ध्यान तान्न यो फन्दा गरिएको रहेछ।
त्यसो त नाडामा अनेक थरि ध्यान तान्ने काम हुन्छन्। ६ वर्षअघि मोटरसाइकल र मान्छे मोडलसँग फोटो खिच्न ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बनाइएको थियो। तैपनि मान्छेको भीड हुन्थ्यो स्टलमा। यस पटक भने त्यसरी पैसा तिरेर फोटो खिच्न पर्दैन थियो, सित्तैमा खिच्न पाइन्थ्यो।
केही अघिको शोमा विदेशी मोडलहरु समेत मगाइएको थियो। तर यस पटक भने सबै नेपाली मोडलमात्रै थिए। हेरौँ केही फोटो
भिडियो हेर्नुस्। तल भिडियो नखुले यहाँ क्लिक गर्नुस्।
6 thoughts on “नाडामा गाडी, गाडीभित्र नक्कली नोटको गड्डी”
Pingback: नेपालमा पनि छापिएको थियो शून्य रुपैयाँको नोट – MySansar
ट्राफीक जाम हुन्छ भनेर अब नया गाडी नै नल्याउने त ?? गाडी थपिन्छ, जाम बढ्छ, अरु फराकिलो सडकको आवश्यकता महसुस हुन्छ र अनि बिकाश हुन्छ | पोजेटिभ सोचको बिकास गरौ न !!
जाबो भारतमा 5/7 लाख पर्ने गाडिलाइ नेपालमा 30/35 लाख तिर्नुपर्या छ, हो यहिनेर हो सरकारको चरम लूटतन्त्र, संसारमै नभएको चर्को न चर्को सवारीसाधनमा कर नेपाल सरकारले लगाउदै आएको छ, त्यो पनि 240% tax, यसरी गरिब जनताको ढाड नै भाचिने गरि सवारीमा कर किन, प्रस्न यहि हो मेरो, जबसम्म सरकारले सवारीसाधनमा सस्तो कर लागू गर्दैन तबसम्म गरिब जनताले गाडी किनेर चढ्नु आकाशको फल आँखा तरि मर भनेजस्तै हुनेछ, तसर्थ सम्पुर्ण गाडी ब्यावोसायी तथा नेपाली जनतालाइ हृदयदेखिनै यो अनुरोध गर्दछु कि आ आफ्नो ठाउबाट यो लूटतन्त्र खारेज गर्न सरकारलाई चर्को दबाब दिऔं ताकी सबैले गाडी किनेर चढ्न सकुन, जय नेपाल जय नेपाली
Sadish Sigdel says:
Indian price ma paune ho vaney ta Nepal ko traffic jam kaile ni khuldaina.
तपाईं काठमाडौको ट्राफिक जाम मात्रै हेरेर कुरा नगर्नुस न,
नाडा को नेपाली अर्थ “नालायक डाका ” हो ।